Shaqooyinka Ay Xiiseeyaan Wakhtigooda Firaaqada Qaar Ka Mid Ah Madaxweynayaasha Dunidu Iyo Xiisaha Ku Lammaan Hiwaayadooda | FooreNews
Home Barnaamijo Shaqooyinka Ay Xiiseeyaan Wakhtigooda Firaaqada Qaar Ka Mid Ah Madaxweynayaasha Dunidu Iyo Xiisaha Ku Lammaan Hiwaayadooda
Shaqooyinka Ay Xiiseeyaan Wakhtigooda Firaaqada Qaar Ka Mid Ah Madaxweynayaasha Dunidu Iyo Xiisaha Ku Lammaan Hiwaayadooda
FoorenewsDec 23, 2017Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan, wararka0
Cammaan, December 23, 2017- (Foore)- Fardo-fuulka, dabbaasha, toog-barashada, ugaadhsiga, dhaqashada ugaadhha iyo arrimo kale oo badani waxa ay yihiin hab-dhaqammada dadka qaar xiiseeyaan ee dhaqankooda asalka ah ku aroora iyada oo dad badani wakhtigooda firaaqada ay ku wakhti qaataan arrimo kuwaasi oo kale la mid ah iyo kuwo kaleba. Inkasta oo wakhtigan casriga ah dad badan oo adduunka ku nooli ay ka siman yihiin in ay wakhtigooda firaaqada ku qaataan ciyaaro ama madadaalo ay ka mid yihiin dhagaysiga muusiga, ciyaaraha, daawashada aflaamta iyo kuwo kale haddana badan oo dunida joogaa waxa ay hiwaayaddaasi u arkaan mid aan ka turjumayn sooyaalkooda taariikheed iyo xiisaga hiwaayaddooda asalka ah waxaanay sameeyaan oo ku wakhti qaataan arrimo kale.
Shabakadda wararka ee Alcarabi ayaa maqaal ay kaga hadlayso arrintan oo Wargeyska Foore idiinka soo turjumay ayaa waxa ay ku soo qaadatay dhawr Madaxweyne oo Carbeed iyo hiwaayadooda ay xiiseeyaan in ay ku wakhti qaataan wakhtigooda firaaqada waxaanay kala yihiin:
Boqor Maxamedka Lixaad ee Morocco:
Boqorka waddanka Morocco ee woqooyoga qaaradda Afrika Maxamedkii Lixaad waxa uu caan ku hayay jacaylka uu u qabo in uu mar walba oo uu firaaqo helo wakhtigiisa ku qaato ugaadhsiga isaga oo inta uu qori rayfal ah qaato u baxo kaymaha halkaasi oo uu ka soo ugaadhsado duur-joogta sakaarada iyo deeradu ka mid tahay. Waxa uu jecel yahay in uu gacantiisa ku soo toogto ugaadha oo uu daba socdo maanta oo dhan.
Boqor Cabdallaha Labaad ee Urdun:
Boqor Cabdalla Bin Xuseen oo ah Boqor Cabdallaha labaad ee dalka Boqortooyada Haashimiyiinta ee Urdun waxa ay hiwaayaddiisu tahay kaxaynta Mootooyinka isaga oo inta badan wakhtigiisa firaaqada uu leeyahay mar walba fuula oo kaxeeya mootooyinka waaweyn gaar ahaan kuwa lagu baratamo. Mar walba waxa si kedis ah loogu arkaa goobo aan laga filayn isaga oo koofiyad weyn oo bir ah xidhan kadibna sidii nin Filim matalaya Mooto weyn duulinaya waana hiwaayad uu illaa yaraantiisii jeclaa illaa imikana aanu ka daalin isaga oo sannad walba soo iibsada Mootooyin casri ah oo uu ku madadaasho.
Saddaam Xuseen (Ilaahay Ha U Naxariisto):
Madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddaam Xuseen waxa uu ahaa nin aad u jecel haysashada hubka iyo in uu mar walba ku toog-barto. Waxa uu si gaar ah u xiisayn jiray baastooladaha iyo qoriga AK-47 isaga oo marar badan la arki jiray isaga oo ku shiish-baranaya ama ku dammaashaadaya ridista hubkaasi wakhtiyada xafladaha qaran ama kuwa qoys ee uu lahaa. Saddaam Xuseen waxa uu si weyn u jeclaa mar walbana gosha ku sidan jiray Baastoolad dheer oo ah nooca dhabanacasta loo yaqaano.
Suldaan Qaabuuska Cummaan:
Suldaan Qaabuus Binu Saciid oo ah Suldaanka Saldanadda Cummaan waxa uu si weyn u jecel yahay fardo fuulka isaga oo illaa yaraantiisii illaa maanta oo uu nin duq ah yahay waxa uu jecel yahay hiwaayaddiisa fardo fuulka. Dhaqan ahaan waxa uu aad u jecel yahay in uu xidho dharka kaakiga ah ee isku eg marka uu doonayo in uu fardaha fuulo kadibna waxa uu fardo shaaximan oo kooraysan ku rukuubiyaa goob barxad ah oo beer ah oo ku taalla qasriga waddankaasi Cummaan looga taliyo ee uu Suldaankani fadhiyo.
Boqor Xuseenkii hore ee Urdun:
King Hussein of Jordan at the controls of his private aeroplane at London Airport circa 1970. (Photo by Ray Bellisario/Popperfoto/Getty Images)
Boqorkii hore ee dalka Urdun Booqr Xuseen Binu Dalaal oo ah Aabbaha Boqorka wakhtigan Cabdalla waxa uu ahaa boqor hiwaayaddiisu layaab leedahay. waxa uu jeclaa kaxaynta diyaaradaha ama bayloodnimada. Waxa uu mar kasta oo uu firaaqi leeyahay hawada u kaxayn jiray diyaarad isaga oo markii uu dhallinyarada ahaa noqday bayloot ka tirsan ciidamada cirka ee dalkaasi Urdun. Illaa uu ka gaboobayay oo uu ka geeriyoonayay waxa uu ahaa boqor jecel kaxaynta Diyaaradda isaga oo inta badan bayloot ka noqon jiray diyaaradaha ciidamada ama kuwo kale oo yaryar oo ah kuwa dadka maalqabeenada ama madaxda ahi leeyihiin.
Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladamir Putin waxa uu si weyn u xiiseeyaa oo aad uga helaa fardo fuulka, ugaadhsiga duur-joogta iyo ciyaarta ledginta ee musaaracada. Waxa uu wakhtigiisa firaaqada jecel yahay in uu duurka galo oo ugaadhsi tago. Inta uu kaxayso Ey sidoo kalena qaato qori ayuu ugaadhsi tagaa. Waxa uu sidoo kale jecel yahay oo mar walba ku madadaashaa ciyaarta Ledginta ah ee Juuduuga loo yaqaano.
Previous PostAbwaan Hadraawi Oo Ka Hadlay Xaala-diisa Caafimaad Waxba Kama Jiraana Ku Sheegay Warar Laba Been Abuuray Next PostMid Ka Mid Ah Wasiirrada Cusub Ee M/weyne Muuse Biixi Oo Cod Sir Ah Oo Laga Helay Ku Abaabulaya Dagaal Iyo Ciidamo Xabadda U Soo Qaata Somaliland, Deegaanka Uu Ka Soo Jeedo Iyo Nooca Colaadda Uu Hurinayay